Shiinaha 2100KG, 2500KG jiidaya Force Precast Golaha Magnet la taaban karo for Steel Formwork ama Plywood Molding hagaajinta saarayaasha iyo alaab | Meiko Magnetics
2100KG Precast Magnet La taaban karo waa nooc awood awoodeed oo caadi ah oo loogu talagalay birlabyada birlabta ah, taas oo si weyn loogu talinayo in loo isticmaalo hagaajinta sidemould ee sanduuqa sandwich-ka la shubay Waxay si fiican ugu habboonaan kartaa qaab-dhismeedka birta ama alwaax alwaaxa looxyada ka sameysan, oo leh adapters kala duwan Sawirka la soo bandhigay waa qalab isku xiraya alwaax ama shaashad dhinac-ka sameysan.
Ka dib marka la riixo badhanka, magnets-ka sanduuqa ayaa miiska si adag u haya. Way fududahay in lagu nadiifiyo saxanka birta ee saxanka alwaaxda leh ciddiyo. Waxaa lagu dhaqaajin karaa adigoo si fudud hoos ugu riixaya badhanka gacanta ama cagta. Si loo baabi'iyo, magnets-ka waxaa si fudud u sii daayay lever bir ah (si uu u jiido batoonka). Meesha aan firfircooneyn, magnets magnetka ayaa si fudud looga saari karaa foomka miiska. Magnets la taaban karo precast loo isticmaali karaa keligiis ama ku xiran adpator si loo hagaajiyo qaab. Caadi ahaan 2100Kg sanduuqa xoogga ee qumman ayaa si fiican ugu habboon 60-90mm wax soo saarka darbiga derbiga dhumucdiisa. Sidoo kale, waxaan awoodnaa inaan soo saarno awood kale oo magnets box ah, xitaa 2500KG, nooca 3000KG sida dalabaadkaaga ah.
Hore: 1800KG Magnet Magnet leh badhanka Daar / Deyn ee Nidaamka Qaab dhismeedka Prefabricated
Xiga: Neodymium Disc Magnet, Wareegga Magnet N42, N52 ee Codsiyada Elektaroonigga ah
Neodymium Magnet aan caadi ahayn oo leh Black Epxoy Coa ...
ABS Rubber Magnet Magdhow Wareegtada ah ee meelaynta ...
Steel Lever Bar for sii daayo Riix / jiid Button ...